Tallaabo-tallaabo Tutorial Sidee si ay u gudbiyaan iPhone in Computer New
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan iPhone in Computer New
"Waxaan dhawaan helay laptop cusub oo waxaan jeclaan lahaa inaan si ay u gudbiyaan waxyaabaha aan iPhone gal computer this. Tani ma suurto gal ah? Sidee ayaan u tegi oo ku saabsan u samaynayso?"
God computer jir, waayo, mid cusub, kaliya si aad u ogaato in aad uma content wareejin karaan ka iPhone in computer cusub? waxa ka nixi haddii aad kuma wareejin karaan faylasha la yaab leh, gaar ahaan heesaha dilaaga oo aan iibsan yihiin ka Lugood Store ka iPhone in computer cusub. Ka dhig funaanado aad on. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa si qumman oo ay u gudbiyaan iPhone music, videos, xiriirada, SMS, sawiro, iwm in computer cusub.
Qaybta 1. Music Transfer, Videos, iyo Playlists ka iPhone in computer cusub
Qaybta 2. dhaqaaq barnaamijyadooda ka iPhone in computer cusub
Qaybta 1. Music Transfer, Videos, Photos oo ka iPhone in computer cusub
Download TunesGo Wondershare. Waa software ah in aan u socoto si ay u isticmaalaan si ay u gudbiyaan music, videos, iyo sawiro ka iPhone in computer cusub. Labada Wondershare TunesGo (Windows) iyo Wondershare TunesGo (Mac) ayaa laga heli karaa. Qaybtan, waxaan diirada ku saabsan sida iPhone si ay u gudbiyaan si computer cusub Wondershare TunesGo (Windows) on PC.
Fiiro gaar ah: . Hadda Wondershare TunesGo (Windows) taageertaa wareejinta music, videos, sawiro, SMS, xiriirada, iwm ka iPhone in computer cusub Wondershare TunesGo (Mac) oo kaliya taageeraa music, videos, iyo sawiro hadda.
Connect aad iPhone la your computer cusub cable USB in iPhone la yimaado iyo bandhigista Wondershare TunesGo ah. Ka dib markii ay ku xiran yihiin si guul ah, MobileGo ee macruufka muujiyaan doonaa iPhone uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Transfer content iPhone in computer cusub
Dhinaca bidix ee suuqa ugu weyn, waxaad ka arki kartaa warbaahinta, playlists, sawiro, xiriirada, iyo SMS in la soo bandhigay. Dhammaan songs, Podcasts, Lugood U, filimada, bandhigyada TV, videos music, iyo buugaag ku jira suuqa kala Media. Riix shay kasta ee dhinaca bidix ee suuqa kala. Dooranaysaa files baahisey oo guji "Dhoofinta in" dusheeda ee suuqa si ay u wareejiyo si aad u computer.
Iyadoo Wondershare TunesGo (Windows), waxaad awoodi karaa inuu wareejiyo songs, videos, buugaag, sawiro, SMS, iyo xiriirada ka iPhone in computer cusub si fudud.
Inkastoo uusan u dhaqaaqin content iPhone in computer cusub, ka sokow files warbaahinta, aad rabto in laga yaabo in ay u gudbiyaan barnaamijyadooda iPhone in computer cusub. Taas waxaad ku samayn kartaa Lugood on your computer. Ogolaato your computer la ID Apple aad. Connect aad iPhone la PC la cable USB iyo abuurtaan Lugood. Guji View> Show galeeysid . Midig u guji aad iPhone hoos Device. Dooro "Iibsasho Transfer" ka mid ah liiska hoos-hoos. Ka dibna waxaad arki kartaa Chine in iPhone aad iibsatay ka Lugood Store wareejiyo Lugood Library.
Tani waa sida ay u guuraan iPhone in computer cusub, oo ay ku jiraan music, videos, sawiro, SMS, xiriirada, barnaamijyadooda ka iPhone in computer cusub. Rajaynaynaa in hagahan waa waxtar.
Isku day TunesGo Wondershare si ay u gudbiyaan music iPhone in computer cusub oo hadda!
Daawo Video ah in ay bartaan sida ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPhone ah in Computer a New